प्रदर्शनमा ‘मिस्टर झोले’ र ‘बटरफ्लाई’, चल्ला कुन ? « Ramailo छ
प्रदर्शनमा ‘मिस्टर झोले’ र ‘बटरफ्लाई’, चल्ला कुन ?
यो शुक्रबार दुई स्टार परिक्षामा उत्रिएका छन् । अभिनेता दयाहाङ राई र अभिनेत्री प्रियंका कार्की स्टारर फिल्म क्रमशः ‘मिस्टर झोले’ र ‘बटरफ्लाई’ यो सातादेखि एकसाथ प्रदर्शनमा आएका हुन् । चल्तीका यी दुई स्टार अभिनित फिल्मले कस्तो व्यापार गर्लान् ? कुन फिल्म चल्ला ?
‘तान्द्रो’ पछि दयाहाङ अभिनित फिल्म ‘मिस्टर झोले’ प्रदर्शनमा आएको हो । रामबाबु गुरुङ निर्देशित कमेडी फिल्ममा दयासँगै दिया पुन, बर्षा राउत, बुद्धि तामाङ, प्रविण गतिवडा, विजय बराल लगायतको अभिनय रहेको छ । सिनेमा आर्टस् र टेकेन खड्का प्रोडक्सनको संयुत्त प्रस्तुती रहेको फिल्ममा टेकेन खड्का र रौनक विक्रम कंडेल निर्माता रहेका छन् । दयाहाङसँग गरिएको रमाईलो कुराकानी हेर्नुस् :
यस्तै ओम प्रतिक गुरुङको निर्देशन रहेको फिल्म ‘बटरफ्लाई’ मा प्रियंकासँगै नायक आर्यन अधिकारी र अर्पण थापाको मुख्य भूमिका रहेको छ । ‘फाटेको जुत्ता’ पछि प्रियंका अभिनित ‘बटरफ्लाई’ प्रदर्शनमा आएको हो भने आर्यनको यो दोश्रो फिल्म हो । गत साल ‘के म तिम्रो होइन र’ बाट आर्यनले रजतपटमा डेव्यु गरेका थिए । अर्पण अभिनित फिल्म ‘फिर्के’ गत साता प्रदर्शनमा आएको थियो । आर्यन र प्रियंकासँग गरिएको रमाईलो कुराकानी हेर्नुस् :